တရုတ်နိုင်ငံက လှည့်လည်သွားလာနေသော တောဆင်ရိုင်းအုပ်အား သင့်လျော်သောနေရာသို့ လမ်းညွှန်ပေးမည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ယွိရှီးမြို့ စီကျယ်မြို့နယ်ခွဲတွင် အာရှတောဆင်ရိုင်းအုပ်အား ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း ၊ ဇွန် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း လှည့်လည်သွားလာနေသော အာရှတောဆင်ရိုင်းအုပ်အား သင့်လျော်သောနေရာသို့ လမ်းညွှန်ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တာဝန်ရှိသူများက ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
-တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ယွိရှီးမြို့ စီကျယ်မြို့နယ်ခွဲတွင် အာရှတောဆင်ရိုင်းအုပ်အား ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၎င်းတို့၏ မူလနေရပ်မှ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့် ခရီးကြမ်း သွားလာခဲ့ပြီးနောက် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည့် တောဆင်ရိုင်းအုပ်သည် ဇွန် ၉ ရက်နှောင်းပိုင်းတွင် လူဦးရေ ၈ သန်းရှိသော ကူမင်းမြို့တော်တည်ရှိရာ ယူနန်ပြည်နယ် ရှစ်ဆောင်ပဏ္ဏား တိုင်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ခွဲသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဦးတည်လာခဲ့သည်။
ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ဆင် ၁၄ ကောင်သည် ယွိရှီးမြို့ စီကျယ်မြို့နယ်တွင် ဆက်လက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဆင်အုပ်ပြောင်းရွှေ့မှုအား စောင့်ကြည့်နေသော ရုံးချုပ်များ၏ တာဝန်ခံများထံမှ သိရသည်။ ဆင်အုပ်မှ ကွဲထွက်လာသော အခြားဆင်သည် ကူမင်းမြို့ Jinning ခရိုင်၌ လွန်ခဲ့သော ၈ ရက်ကတည်းက ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ရုံးချုပ်များက ပြောကြားရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသော ဆင်များအား မူလနေရာသို့ရောက်ရှိစေရန် အစားအစာဖြင့် မျှားခြင်း နှင့် လမ်းများ ပိတ်ဆို့၍ လားရာ လမ်းကြောင်း တည့်ပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း နှင့် မကြာသေးမီရက်များက မိုးရွာသွန်းမှုများ နှင့် အပူချိန် ကျဆင်းမှုများကဲ့သို့သော ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများသည် ဆင်အုပ်အား သင့်လျော်သော နေရပ်သို့ ပြန်လှည့်ရန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသတွင်းတာဝန်ရှိသူများသည် ဆင်အုပ်အား စောင့်ကြည့်ရန် နှင့် လူနှင့်ဆင်အကြား ပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ရန် ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် လူပေါင်း ၃၁၉ ဦး ၊ ယာဉ်အစီးရေ ၆၀၀ ကျော် နှင့် ဒရုန်း ၁၈ စင်းတို့ဖြင့် အစီအမံများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် စုစုပေါင်း ပြည်သူ ၃,၅၄၈ ဦးကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော်က တာဝန်ရှိသူများသည် ဆင်အုပ် ဖြတ်သန်းသွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် ဘေးလွတ်ရာလမ်းကြောင်းလွှဲပေးခြင်း နှင့် လူနေထူထပ်သောဒေသများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ရှောင်လွှဲရန် အစားအစားများဖြင့် မြှား၍ အာရုံလွှဲခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အစောင့်ရှောက်ဖြင့်လည်း လိုက်ပါစေခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
အာရှဆင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံအဆင့် ထိန်းသိမ်းမှု အဆင့်-A အောက်တွင် သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့အား ယူနန်ပြည်နယ်၌ အများဆုံး တွေ့ရှိရသည်။ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု တိုးမြှင့်ခဲ့သည့်အတွက် ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်း တောရိုင်းဆင်အကောင်ရေသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၁၉၃ ကောင်မှ ယခုအခါ ၃၀၀ ခန့်အထိ တိုးလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
1.Aerial photo taken on June 13, 2021 showsaherd of wild Asian elephants in Shijie Township of Yimen County, Yuxi City, southwest China’s Yunnan Province. The wandering herd of wild Asian elephants that has caught global attention is lingering in the Shijie Township in the city of Yuxi, southwest China’s Yunnan Province, authorities said Saturday. All the elephants are safe and sound, according to the headquarters in charge of monitoring their migration. (Xinhua)
2.Aerial photo taken on June 13, 2021 showsaherd of wild Asian elephants in Shijie Township of Yimen County, Yuxi City, southwest China’s Yunnan Province. The wandering herd of wild Asian elephants that has caught global attention is lingering in the Shijie Township in the city of Yuxi, southwest China’s Yunnan Province, authorities said Saturday. All the elephants are safe and sound, according to the headquarters in charge of monitoring their migration. (Xinhua)